Otu esi etinye PHP 8.0 na AlmaLinux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye PHP 8.0 na AlmaLinux 8
November 4, 2021 September 4, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa PHP 8.0
Na-enyere PHP 8.0 (Remi) ebe nchekwa
Tinye PHP 8.0
Ntinye PHP-FPM nke PHP 8.0
PHP 8.0 bụ mmelite dị ịrịba ama nke asụsụ PHP ewepụtara na Nọvemba 26, 2020, nnukwu mmụba na ntọhapụ PHP 7.4 dị. PHP ọhụrụ ahụ nwere ọtụtụ atụmatụ na nkwalite ọhụrụ, gụnyere arụmụka akpọrọ aha, ụdị otu, njiri mara, nkwalite ihe nrụpụta, okwu egwuregwu, ndị na-ahụ maka nchekwa efu, JIT na nkwalite n'ụdị sistemu, njikwa njehie, na nkwụsi ike.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye PHP 8.0 na AlmaLinux.
Nkuzi a ga-eji ya sudo iwu na na-eche na ị nwere ọnọdụ sudo. Iji nyochaa ọkwa sudo na akaụntụ gị:
Ọ bụrụ na ịtọbeghị akaụntụ onye ọrụ sudo ma ọ ga-amasị gị, gaa na nkuzi anyị Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na AlmaLinux.
Ugbu a, PHP 8.0 egosighi na AlmaLinuxs AppStream, ebe ọ ka dị ọhụrụ ma ọ nwebeghị nke ọma n'agbụ na ebe nchekwa RHEL. Agbanyeghị, ịnwere ike ịwụnye PHP site na (Remi) ebe nchekwa, ebe nchekwa ndị ọzọ na-akwụghị ụgwọ nke na-ebuga PHP 8.0 kachasị ọhụrụ yana gụnyere PHP 8.1 na-abata.
Ọrụ mbụ bụ ịwụnye ihe (EPEL) ebe nchekwa, nke na-anọchi anya (Ngwunye mgbakwunye maka Linux Enterprise). Maka ndị ọrụ ọhụrụ na ezinụlọ RHEL na AlmaLinux, EPEL nwere ngwugwu ngwanrọ a na-ejikarị eme ihe maka Priselọ ọrụ Linux.
Iji tinye EPEL, jiri ihe ndị a (dnf) iwu ọnụ:
ụdị (Y), wee pịa (Tinye igodo) aga n'ihu.
Ugbu a ị gbakwunyela ebe nchekwa EPEL, gbanye (Nchekwa Remi) ya na ndi a:
Ọzọ, jiri (dnf) iwu ka imelite ndepụta nchekwa gị:
Ị ga-ahụ ajụjụ n'ọnụ ọnụ gị gbasara ibubata ihe ( igodo GPG) maka ebe nchekwa Remi dị ka n'okpuru:
Mara na a ga-akpali gị ugboro abụọ ọzọ ka ịpịnye (NA) ugboro abụọ ọzọ ibubata igodo GPG ọzọ. Nke a dị mma ime.
Na-esote, a ga-akpali gị ịkwalite ntọhapụ EPEL:
Ebe nchekwa EPEL gị emeela ugbu a, ma ị dịla njikere ịga n'ihu n'akụkụ nkuzi ahụ.
PHP 7.2 bụ nhọrọ PHP ndabara maka nrụnye ọkọlọtọ na Rhel/Alma Linux yana ebe nchekwa Remi. Ndụmọdụ dị ngwa bụ iji (ndepụta.php) iwu ịhụ nhọrọ dị na ndabara. Iwu a nwere ike ime nke a:
sudo dnf module list php
Ị ga-enweta ihe mmepụta dị ka n'okpuru. Rịba ama (d) mkpado maka ndabere PHP ka etinyere:
Dị ka ị na-ahụ n'elu, mkpado (d) dị n'akụkụ PHP 7.2, nke ị ga-achọ ịtọgharịa wee gbanwee gaa n'ihu itinye PHP 8.0 na AlmaLinux. Ịtọgharịa ndepụta PHP dị mfe site na iwu a:
sudo dnf module list reset php
Na-esote, mee ka PHP 8.0 jiri iwu a:
Mwepụta ihe atụ ozugbo emechara:
Ugbu a ị gbakwunyela ebe nchekwa PHP Remi wee mee ka PHP 8.0 bụrụ ụdị ndabara na sistemụ AlmaLinux gị, ị nwere ike iwunye PHP 8.0 site na iwu a:
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịwụnye ndọtị ndị a na-ejikarị maka PHP 8.0, jiri iwu a:
sudo dnf install php-cli php-fpm php-curl php-mysqlnd php-gd php-opcache php-zip php-intl php-common php-bcmath php-imap php-imagick php-xmlrpc php-json php-readline php-memcached php-redis php-mbstring php-apcu php-xml
Mara, wepụ nhọrọ ndị ị na-achọghị nke a bụ nhọrọ.
Ugbu a ị tinyela PHP 8.0 na mgbakwunye na-elele ụdị ahụ site na iwu a:
PHP 8.0.10 (cli) (built: Aug 24 2021 15:40:40) ( NTS gcc x86_64 )
Zend Engine v4.0.10, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.0.10, Copyright (c), by Zend Technologies
Enweghị PHP-FPM na ndabara na AlmaLinux. Iji mee ka PHP-FPM rụọ ọrụ na buut sistemụ wee malite ịmalite ya, jiri ihe ndị a (systemctl) iwu:
sudo systemctl enable php-fpm && sudo systemctl start php-fpm
Ọmụmaatụ nke iji mee nke ọma (symlink):
Ugbu a, dị ka ọ dị na mbụ na ịlele ọkwa nke ihe ndị ọzọ achọrọ na nrụnye LEMP gị, jiri ihe ndị a (systemctl) iwu ọnụ ka ịlele ọkwa iji hụ na ihe niile na-arụ ọrụ:
Ọ bụrụ na enweghị njehie dị, ị ga-enweta nsonaazụ a:
N'adịghị ka nrụnye PHP-FPM na Debian/Ubuntu na-eji (www-data) onye ọrụ, nke a abụghị ikpe maka nrụnye ezinụlọ RHEL. Site na ndabara na AlmaLinux, a haziri ọrụ PHP-FPM ka a na-agba ya (apache) onye ọrụ, nke ezighi ezi ebe ọ bụ na anyị na-eji Nginx, nke a kwesịrị ka edozi ya.
Nke mbụ, meghere ndị a (www.conf) nhazi faịlụ:
Na-esote, dochie (apache) onye ọrụ na otu na (Nginx) onye ọrụ na otu:
Ka ịchekwaa, pịa (CTRL+O) wee pụọ (CTRL+X).
Ugbu a, ị ga-ebugharị ma ọ bụ malitegharịa ọrụ PHP-FPM gị:
N'ime nkuzi a, ị mụtala banyere nke (EPEL) ebe nchekwa na (Remi) ebe nchekwa na otu esi etinye ha na sistemụ arụmọrụ AlmaLinux 8 gị, yana ịwụnye PHP 8.0 site na ebe nchekwa Remi.
N'ozuzu, PHP 8.0 na-amalite ugbu a ịghọ ọkọlọtọ mara mma n'ebe niile. Site na mmepe nke PHP 8.1 na-abịa, ndị mmepe na-emezi ngwa weebụ ha PHP 8 enyi na enyi, gụnyere nnukwu CMS WordPress nwere isiokwu ndị ọzọ na ngwa mgbakwunye devs iji nweta PHP 8.0 akwadoro nyere uru 8 nwere na nchekwa na ọsọ tụnyere 7. usoro.
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux, PHP Mail igodo
Otu esi etinye qBittorrent kacha ọhụrụ na Linux Mint 20
Otu esi etinye LEMP Stack (Nginx, MariaDB, na PHP) na AlmaLinux 8